Iray amin’ireo Antoko Politika Manankarena Indrindra ao Eoropa No Mitondra Ny Iray amin’ireo Firenena Eoropeana Mahantra Indrindra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2016 11:48 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, Español, русский, عربي, English
Faritra aorian'ny foiben'ny antoko politika VMRO-DPMNE ao Skopje, Makedonia. Sary: GV, CC BY.
Iray amin'ireo firenena mahantra indrindra ao Eoropa i Makedonia. Na izany aza, nisy fanadihadiana vao haingana nanambara fa ny antoko mpitantana ao aminy VMRO-DPMNE dia nanangon-karena maro kokoa miohatra amin'ireo namany any amin'ireo firenena manan-karena indrindra ao amin'ny kaontinanta.
Ny Foiben'ny Fanaovan-gazety Fanadihadiana SCOOP ao Makedonia dia nizara tety anaty serasera ny fanadihadiany iray amin'ny teny Anglisy izay mampitaha ny habetsaky ny fananana ananan'ireo antoko politika ao Makedonia amin'ny an'ireo ao Eoropa Andrefana. Ny antoko eo amin'ny fitondrana ao Makedonia dia manana fananana 93 misoratra aminy ankoatr'ireo biraon'ny antokony manerana ny firenena miaraka amina tranobe mirefy 33.238 metatra toradroa, tany fambolena sy kijàna. Manodidina ny 60 tapitrisa Euros (66 tapitrisa dolara Amerikana) ny tomban'ny lanja ara-barotr'izany fananana rehetra izany.
Mampitaha ny tena fananan'ny antoko politika hafa ilay fanadihadiana, anisan'izany ny sasany avy ao amin'ireo firenena manankarena indrindra ao Eoropa:
Aorian'ny VMRO-DPMNE, iray amin'ireo antoko manana fananana lehibe indrindra ny Antoko Afovoany ao Soeda, fananana heverina ho manodidina ny 53 tapitrisa euros ( 58.3 tapitrisa dolara). Ny CDU an'i Angela Merkel ao Alemana dia manana fananana manodidina ny 50 tapitrisa euros (55 tapitrisa dolara). Ny Antoko Labor ao Angletera dia manana fananana tena izy manodidina ny 9 tapitrisa pounds (13.4 tapitrisa dolara).
Raha ny rakitry ny Banky Iraisampirenena, ny harin-karena faobe ao Makedonia (PIB) isan'olona dia manodidina ny latsaky ny impolo kely lavitra noho ny an'i Soeda, Alemana sy i Angletera. Miaraka amina vahoaka roa tapitrisa, ny fitambaran'ny PIB-ny isan-taona dia manodidina ny 10 lavitrisa dolara. Raha hampitaha, ny PIB-n'i Soeda dia 579.7 lavitrisa dolara, ny an'i Alemaina 3.73 arivo lavitrisa dolara, ary ny an'i Angletera 2.68 arivo lavitrisa dolara.
Manana ny fidiram-bola tsy mitovy indrindra ao Eoropa ihany koa i Makedonia, miaraka amina fatra mbola ambony (43.6) noho ny an'i Rosia (42).
Nanangona antontan-kevitra mikasika ny zavatra hitany momba ireo fananan'ny antoko politika ao Makedonia ny SCOOP ho ao anatinà lahatsoratra manankarena amin'ny resaka multimedia, izay hita amin'ny teny Anglisy ihany koa. Ahitana sarintany ifandrimbonana (tsy amin'ny teny Anglisy) an'ireo fananana tena izy fantatra amin'ny fomba ofisialy.
Araka ny fanadihadiana, iray amin'ireo fananana ambony lafo vidy indrindra ananan'ny VMRO-DPMNE ny foiben-toeran'ny antokony misy rihana valo, tombanana ho manodidina ny 40 tapitrisa euros (43.9 tapitrisa dolara). Nanambarana ny antoko fa tsy nandoa na kely aza ho an'izany izy, satria namboarina mpiantoka asa iray ‘nanolotra’ tolotr'asa fanorenana ho takalon'ny fampiasana ny ampahany amin'ilay trano hanaovana hotely amin'ny hoavy.
Ilay mpiantoka asa, Mincho Jordanov, dia iray amin'ireo lehilahy manankarena indrindra ao amin'ny firenena, sy ny orinasany D.G. Beton A.D. no nanangana ampahany tamin'ilay tetikasa fanatsarana Skopje 2014 nahabe resaka, nahazoana vola mihoatra ny 215 tapitrisa euros (236 tapitrisa dolara) tamin'ny volan'ireo mpandoa hetra.
Foiben-toeran'ny VMRO-DPMNE, ilay antoko avy amin'ny elatra havanana mitondra ao Makedonia. Sary avy amin'ny GV, CC BY.
Tsy nisy mpanao gazety mahaleo tena niditra tao amin'ilay tranobe hatramin'ny nanokanana azy tamin'ny 2015. Nantsoina hoe ”Lapan'ny Dr. Hristo Tatarchev” taorian'ny fitsimbadihan-ny-revolisionan-ny-taonjato-faha-20 , voalaza fa voaravaka tsara tamina hosodoko vita amin'ny loko menaka amin'ny fomba fiheverana sosialista lazaina fa misanda amina tapitrisa euros maromaro.
Sary hosodoko mampiseho an'i Nikola Gruevski filohan'ny antoko mitondra ao Makedonia, ny zanaky ny mpiray tampo amin'ny ray aman-dreniny, Sasho Mijalkov, ary ireo mpiara-miasa tamin'ny famoriam-bahoaka nataon'ny antoko VMRO-DPMNE. Sary avy amin'i Nova, nampiasaina miaraka amin'ny fahazoandalana.
Tsy natao ho an'ny daholobe ny vaovao momba ny isan'ny olona miasa any amin'ireo birao maro ao anatin'ny foiben-toeran'ny VMRO-DPMNE. Araka ny tatitr'ireo mpitsirika avy amin'ny fanjakana, tsy nanana mpiasa voasoratra tamin'ny 2013 ny VMRO-DPMNE, tamin'ny 2014 mpiasa iray no nananany, ary tamin'ny 2015 roa no mpiasa tao, miaraka amina salanisana karama tonga hatramin'ny 1500 euros isam-bolana.
Belza manampahaizana, Peter Vanhoutte, izay nanamora ny fifampiraharahana tamin'ny Fifanarahana Przino (fifanarahana izay teo ambany fanarahamason'ny Vondrona Eoropeana sy ny Firenena Mikambana tamin'ny 2015 hamaranana krizy politika ao Makedonia sy hiantohana ny tsy fitanilàn'ny fifidianana), dia nambaran'ny filohan'ny antoko Nikola Gruevski fa ‘olona tsy tiana ho hita’ taorian'ny nanambarany fa ny fitambaran'ny vola naloan'ny antoko ho an'ny hetra amin'ny vola miditra tamin'ny 2014 dia tokony ho teo amin'ny 3.200 euros teo. Ny hetra amin'ny vola miditra dia 10% amin'ny karama, noho izany dia mora ny mampihatra manontolo azy io amin'ny antontam-bola isam-bolana etsy ambony. Nanazava i Vanhoutte:
Araka ny kajikajiko, afaka manakarama olona iray ianao miaraka amin'izany vola izany. Araka izany, manakarama olona iray fotsiny amin'ny fomba ofisialy ve ny antoko lehibe indrindra ato amin'ny firenena? Toy ny olana ny fahitako izany ary mety midika fa ireo olona miasa ao amin'ny antoko dia karamain'ny Fanjakana. Niteny azy ireo aho fa olana izany ary raha tsy manadihady izany olana izany ry zareo, izaho no hanao izany. Ity fotokevitra ity, dia manangana saina mena. Nitovy tamin'izany ny niaraka tamin'ny Masoivoho misahana ny Fifandraisana Elektronika. Fantatsika fa nomen-dry zareo vola ireo kodiarana Ferris ao Vadar ry zareo ary ny tilikambo ao Vodno, fa rehefa namaky ny lazambidy (faktiora) aho, tsy nieritreritra izany toy ny ampahany amin'ny asan-dry zareo aho. Fanararaotana famatsiambolam-panjakana ve izany? Mazava fa tsy tia ny zavatra noteneniko ilay mpitsirika, ary niantso olona tao amin'ny antoko. Tamin'izay hariva izay, niteny i Gruevski tao anatina tafatafa iray nilaza fa tokony ho ambara ho toy ny ‘olona tsy tiana ho hita’ aho.
Mpikambana ao amin'ny Antokom-Bahoaka Eoropeana ny VMRO-DPMNE, ”Ny Afovoany- ankavanana, antoko politika pro-Eoropeana izay itambaran'antoko nasionaly 70 avy amina firenena 40.” Hoy ny SCOOP, nitombo be ny fananan'ny antoko taorian'ny nahazoany fahefana tamin'ny 2006.